Ama-Solstices nama-equinox: ayini, izici kanye nokufuna ukwazi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Siyazi ukuthi uMhlaba uneminyakazo eminingi okungukujikeleza nokuhumusha. Ngalokhu sisho ukuthi ngenxa yale mibuthano, kukhona ama-solstices nama-equinox. Isikhathi se-equinox yisikhathi sonyaka lapho ilanga litholakala khona ngenhla kwe-equator, ngakho-ke libekwe ngaphezu kwenhla. Lokhu kusho ukuthi imini nobusuku cishe banesikhathi esifanayo. Okuphambene kwenzeka nge-solstice.
Kule ndatshana sizokutshela zonke izici nomehluko phakathi kwama-solstices nama-equinox.
1 Yini ama-solstices nama-equinox
2 Ama-Solstices nama-equinox ehlobo nasebusika
2.1 I-Summer Solstice
2.2 Ama-Solstices nama-equinox: i-solstice yasebusika
2.3 Ama-Equinox entwasahlobo nasekwindla
Yini ama-solstices nama-equinox
Okokuqala kunakho konke ukwazi ukuthi yini ama-solstices nama-equinox. Inkabazwe yilapho ilanga likhona enkabazwe futhi usuku luhlala ngokufana nobusuku. Lokho wukuthi, zihlala cishe amahora angu-12. Lokhu kwenzeka kabili ngonyaka, cishe ngoMashi 20 noSepthemba 22. Lokhu kuhambisana nokuqala kwentwasahlobo nokuwa kwezinye izifunda.
Uma sihlukanisa iplanethi yaba izingxenye ezimbili, enye ikhanyiswa yilanga kanti enye ifihlekile. Kokunye sinemini kanti kwesinye ubusuku. Umugqa ohlukanisayo udlula ngqo ezigxotsheni. Lokhu kwenzeka ngoba ngesikhathi sama-equinox zombili izingongolo azitshekiswanga zibheke noma kude nelanga. Akukwenzeka njalo ngosuku olufanayo. Banomkhawulo wezinsuku ezimbalwa. Lokhu kungenxa yokuthi ubude beminyaka abufani ngaso sonke isikhathi. Khumbula ukuthi njalo eminyakeni engu-4 uma ufaka usuku olulodwa ngaphezulu kukhalenda ngoba kungunyaka wokugxuma. Ngesikhathi se-equinox, ilanga litholakala kwelinye lamaphuzu amabili emkhakheni lapho i-equator yasezulwini kanye ne-ecliptic zihlangana khona. Lokhu kufana nombuthano endizeni efanayo ne-equator. Lokho kusho ukuthi, inkanyezi yasezulwini ukuqagela kwe-equator yasemhlabeni.
I-equinox yomlomo yenzeka lapho ehambela enyakatho kuphela endizeni ye-ecliptic futhi awele yonke i-equator yasezulwini. Lapha siyabona ukuthi inkathi yasentwasahlobo iqala enyakatho Nenkabazwe. Ngakolunye uhlangothi, i-equinox yasekwindla yenzeka lapho ilanga lidabula i-equator yasezulwini liya eningizimu. Kuphawula ukuqala kokuwa.
Ama-Solstices yimicimbi lapho ilanga lifinyelela endaweni yalo ephakeme noma ephansi kakhulu unyaka wonke esibhakabhakeni. Ngonyaka eNyakatho Nenkabazwe kunama-solstices amabili. Ngakolunye uhlangothi sine-solstice yasehlobo kanti ngakolunye uhlangothi i-solstice yasebusika. Owokuqala wenziwa ngoJuni 20-21 kanti i-solstice yasebusika ngoDisemba 22-22. Kuwo womabili ama-solstices, ilanga litholakala komunye wemigqa emibili ecatshangelwayo eMhlabeni eyaziwa njengeTropic of Cancer neTropic of Capricorn. Lapho ilanga selishonile phezu kweTropic of Cancer kulapho kwenzeka khona i-solstice yasehlobo nalapho itholakala eTropic of Capricorn, kuqala ubusika.
Ngesikhathi solstice sokuqala kulapho sithola khona usuku olude kunazo zonke onyakeni, kanti olwesibili usuku olufushane kakhulu nobusuku obude kunabo bonke.
Ama-Solstices nama-equinox ehlobo nasebusika
Kuvame ukucatshangwa ukuthi lolo suku, olokuqala lwenkathi yehlobo, lushisa kakhulu. Kepha akudingeki ngempela. Umkhathi womhlaba, umhlaba esihamba kuwo nezilwandle kumunca ingxenye yamandla enkanyezi yelanga bese kuwugcina. La mandla akhishwa futhi ngendlela yokushisa; noma kunjalo, khumbula lokho Ngenkathi ukushisa kukhishwa emhlabeni ngokushesha okukhulu, amanzi athatha isikhathi eside.
Ngesikhathi sosuku olukhulu, okuyi-solstice yasehlobo, elinye lama-hemispheres amabili ithola amandla amaningi avela eLangeni lonyaka, ngoba iseduze nenkanyezi yenkosi futhi, ngakho-ke, imisebe yenkanyezi eshiwo ifika iqonde kakhulu. Kepha izinga lokushisa kwezilwandle nomhlaba kusesezingeni eliphansi kakhulu, okwamanje.
Ama-Solstices nama-equinox: i-solstice yasebusika
Kunombono omubi emphakathini wonkana mayelana nobusika nehlobo ngokusho kwebanga ukusuka eMhlabeni kuya eLangeni. Kuyaqondakala ukuthi ehlobo kuyashisa ngoba uMhlaba useduze neLanga kanti ebusika kubanda ngoba thina thola kude. Kepha kuphambene ngokuphelele. Ngaphezu kokuma koMhlaba maqondana neLanga, okuthonya amazinga okushisa kweplanethi ukuthambekela kwemisebe yeLanga okushaya ngayo ebusweni. Ebusika, ku-solstice, Umhlaba useduzane neLanga, kepha ukutsheka kwawo kuphakeme kakhulu eNyakatho Nenkabazwe. Ngalesi sizathu, lapho imisebe ifinyelela ebusweni bomhlaba ithambekele kakhulu, usuku lufushane futhi futhi lubuthakathaka, ngakho-ke awawushisi kakhulu umoya futhi uyabanda.
Ama-Equinox entwasahlobo nasekwindla
Lapha kufanele sihlukanise ama-equinox ngokwe-hemisphere lapho sikhona. Ngakolunye uhlangothi, i-hemisphere esenyakatho, lapho kuyi-equinox yasendaweni esinayo esigxotsheni Inyakatho usuku luyohlala izinyanga eziyisithupha, kanti eSouth Pole, ubusuku buzohlala izinyanga eziyisithupha. Futhi kufanele ngikhumbule ukuthi ukwindla kuqala engxenyeni eseningizimu.
Njengoba ukwazi ukubona, ama-solstices nama-equinox ikakhulukazi ngenxa yokuhamba komhlaba maqondana nelanga futhi amazinga okushisa nezimo zemvelo kuncike ekuthambekeni kwemisebe yelanga. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngama-solstices nama-equinox.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ama-Solstices nama-equinox